mai 2018 · Page 3 de 5 · déliremadagascar
politique	 15 mai 2018 R Nirina
Antoko PSD : Mangataka ny fialàn’ny governemanta
Manahy ny hisian’ny fifandonana amin’ireo mpifanandrina ny « Parti Social Democrate de Madagascar » ( PSD). Noho izany, mangataka ny fialan’ny praiministra sy ny governemanta tantaniny izy ireo. Continuer la lecture →
Voatery varotana ny ampaham-bokatra mba hahazoana vola hividianana kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro. Continuer la lecture →
Navoaka tamin’ny fomba ofisialy tany amin’ny oniversite Maninday toliary ny mpitsabo mpanampy sy ny mpampivelona tao amin’ny sampam-pampianarana mpitsabo . Continuer la lecture →
RMTF : Fanovana rafitra fa tsy olona
Roa taona lasa izay no nanambara ny Rodoben’ny Malagasy Tia Tanindrazana ho amin’ny fanorenana ( RMTF ) fa fitondrana jadona sy mpamono olona ny fitondrana HVM. Continuer la lecture →